कोहि छ त आँट हुने ? यो मेसिन बनाउन सक्ने लाई १० लाख दिन्छु भन्दै पुनले गरे यस्तो घोषणा – Dainik Sangalo
कोहि छ त आँट हुने ? यो मेसिन बनाउन सक्ने लाई १० लाख दिन्छु भन्दै पुनले गरे यस्तो घोषणा
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन १०, २०७८ समय: १२:२१:०९
राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक अपिल सार्वजनिक गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय पुनले व्यक्तिगत जीवन बा आविष्कार केन्द्र सँग सम्वन्धित प्राय सबै विषय वस्तु सामाजिक सञ्जाल मार्फतनै सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । पुनले १३ घण्टा अगाडी एक स्टाटस् लेख्दै कम्तिमा १० लाख रुपैंयाको पुरस्कारको बारेमा हेर्नुहोस् अनुसन्धान गर्दा बढी पनि लाग्न सक्छ भन्दै यस्तो सुचना जारी गरेका छन् । त्यसको केहि घण्टा पछाडी फेरी उनले लेखेकाछन् ।
घोषणा नगरी भएन बिषय गंभीर छ, सजिलो छैन। बाँदर धपाउन एकदमै प्रभावकारी चिज बनाएमा अनुसन्धान गरे बापत १० लाख रुपैया पुरस्कार पाउँने भनेकाछन् ।
पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पोष्ट जस्ताको तस्तै
कम्तिमा १० लाख रुपैंयाको पुरस्कारको बारेमा हेर्नु होस्। अनुसन्धान गर्दा बढी पनि लाग्न सक्छ
आँट भएको बहादुरहरुले च्यालेन्ज स्विकार्ने हो त ??? पुरस्कारको रकम कम्तिमा १० लाख रुपैंया राखेको छ । कसैले बाँदरको बिगबिगी बाट किसानहरुलाई बचाउने राम्रो र प्रभावकारी उपकरण बनाउने हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बाट १५ लाख रुपैंया पनि पुरस्कार पाउँछ। किन भने अहिले सम्म संसारको कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताले बाँदर लाई धपाउने सस्तो र प्रभावकारी उपकरण बनाउन सके कै छैन।
कसैले एकदमै प्रभाबकारी र किसानहरुले किन्न सक्ने मुल्यमा बाँदर धपाउने यन्त्र बनाउने हो भने १० लाख रुपैंया वा सो भन्दा पनि बढी नगद पुरस्कार राष्टिय आविष्कार केन्द्रले दिनेछ। त्यो उपकरणको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार उपकरण बनाउने व्यक्तिको नै हुनेछ। त्यसो गर्यो भने सो उपकरण बनाउने व्यक्तिले एक करोड रुपैंया भन्दा निकै धेरै कमाउन सक्छ। कोहि छ त आँट हुने ???
बिशेष गरि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको बाँदर धपाउने साधारण PVC को बन्दुक बनाउने केन्द्र हो भन्ने नेपालीहरु ले चुनौती स्वीकार गर्नु होस्। धन्यबाद छ। बनाउन नसक्ने हो भने धेरै जान्ने नहुनुहोस। धन्यबाद
Last Updated on: September 26th, 2021 at 12:21 pm